२० देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी, यस्तो छ सम्भावित नाम - OK Khabar
ओके खबर २१ फाल्गुन २०७८, शनिबार ०९:४१ मा प्रकाशित ( ३ महिना अघि) १८६ पाठक संख्या
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २० देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले राजदुत नियुक्त गर्न परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आन्तरिक छलफल थालेको पाइएको छ ।
गठबन्धनको पछिल्लो बैठकमा देउवाले प्रचण्ड, नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई राजदूतको नाम दिन आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काका स्वकीय सचिव लीला भट्टराईकाअनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राजदूत सिफारिस तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको बताए ।
उनले भने, ‘एमसीसी पारित गराउने वातावरण बनाउनतिर लागियो । यसले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको थियो । अब पहिलो प्राथमिकताका साथ यो काम भइरहेको छ ।’
स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी आचारसंहिता लाग्ने भएकाले अब केही दिनमै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय निर्वाचनअघि नै सबै देशमा राजदूत नियुक्त गरिने बताए ।
नेपालका ९ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र ३० देशमा दूतावास छन् । कुल ३० वटामध्ये हाल १० वटा मुलुकमा मात्र राजदूत छन् । उनीहरु १० जना परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत हुन् । बाँकी २० वटा नेपाली राजदूतावासमा राजदूत पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।
राजनीतिक कोटाबाट राजदूतका लागि माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल र पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेल दौडमा छन् । यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाका छोरा रूपक सापकोटाको पनि चर्चा छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट डा. युवराज संग्रौला, प्रमेश हमाललगायतको नाम चर्चामा छ ।